Nhau - Nhau dzeCCTV dzakanyora murwi wekuchaja seimwe yenzvimbo nomwe huru dzekuvaka zvivakwa.
Abstract: muna Kukadzi 28, 2020, chinyorwa "inguva yekutanga danho idzva rekuvaka kwezvivakwa" rakaburitswa, izvo zvakakonzera kutarisisa kukuru uye Kukurukurirana nezve "zvivakwa zvitsva" mumusika. Shure kwaizvozvo, nhau dzeCCTV dzakanyora murwi wechaji seimwe yenzvimbo nomwe huru dzekuvaka zvivakwa.
1. Yazvino mamiriro ekuchaja murwi
Iyo nyowani yezvivakwa inonyanya kutarisisa sainzi uye tekinoroji, kusanganisira 5g base chiteshi kuvaka, UHV, intercity yakakwira-kumhanya njanji uye intercity njanji yekufambisa, nyowani simba mota yekuchaja murwi, hombe dhata nzvimbo, huchenjeri hwekugadzira uye indasitiri Internet. Sezvo simba rekuwedzera simba remagetsi emagetsi, kukosha kwekuchaja murwi hakugone kufuratirwa.
Kuvandudzwa kwemotokari nyowani emagetsi ndiyo chete nzira yekuti China ifambe kubva kune huru mota yenyika kuenda kune ine simba nyika yemotokari. Kusimudzira kuvakwa kwenzvimbo dzekuchaja ivimbiso ine simba yekuitwa kwechirongwa ichi. Kubva 2015 kusvika 2019, huwandu hwekuchaja mirwi muChina hwakawedzera kubva pa66000 kusvika pa1219000, uye huwandu hwemotokari nyowani dzemagetsi hwakawedzera kubva pa220000 kusvika pa3.81 mamirioni panguva imwe chete, uye iyo inoenderana mota murwi reshiyo yakaderera kubva pa6.4: 1 muna2015 kusvika 3.1: 1 muna 2019, uye zvivakwa zvekuchaja zvakagadziridzwa.
Zvinoenderana nechirongwa chegwara nyowani remagetsi indasitiri yemagetsi (2021-2035) rakapihwa nebazi rezvemaindasitiri neruzivo rwehunyanzvi, zvinofungidzirwa kuti huwandu hwemotokari nyowani dzemagetsi muChina hunosvika mamirioni makumi matanhatu nemakumi mana nemakumi maviri nemakumi maviri nematanhatu. yemotokari murwi reshiyo ye1: 1, pane mukaha wemamirioni makumi matanhatu nematanhatu mukuvakwa kwekuchaja murwi muChina mumakore gumi anotevera, uye zvinofungidzirwa kuti 1,02 tiririyoni yuan yekuchaja murwi wezvivakwa zvemusika misika ichaumbwa.
Kusvika pane izvi, hofori zhinji dzakapinda mumunda wekuchaja murwi, uye "kuvhima" chiito mune ramangwana chakatanga munzira yekutenderera. Mune ino hondo ye "mari yekutarisa", ZLG yanga ichishanda nesimba kuti ipe yepamusoro-soro sevhisi kumabhizimusi ekuchaja mota.
2. Kupatsanurwa kwenzvimbo dzekuchaja
1. AC murwi
Kana simba rekuchaja riri pasi pe40kW, iyo AC inoburitsa murwi wekuchaja unoshandurwa kuita DC yekuchaja iyo-pabhodhi bhatiri kuburikidza nechaja yemotokari. Simba idiki uye kumhanyisa kumhanya kunononoka. Inowanzoiswa munzvimbo yekupaka yega munharaunda. Parizvino, mazhinji emakesi ndeekutenga mota dzekutumira mirwi, uye kudzora mutengo kwemurwi wese kwakaomarara. AC murwi unowanzozonzi kunonoka kuchaja murwi nekuda kwayo inononoka kuchaja modhi.
2. DC murwi:
Iyo yekuchaja simba yeyakajairika DC murwi ndeye 40 ~ 200kW, uye zvinofungidzirwa kuti muyero wekuwedzeredza uchapihwa muna 2021, uye simba rinogona kusvika 950kw. Iyo yakananga yazvino kuburitsa kubva kumurwi murwi inonongedzera yakanangana bhatiri remotokari, iro rine simba rakakwirira uye nekukurumidza kumhanya kumhanya Inowanzoiswa munzvimbo dzepakati dzekuchaja senge Expressways uye zviteshi zvekuchaja. Hunhu hwekushanda hwakasimba, hunoda kubatsirwa kwenguva refu. DC murwi une simba rakakwira uye nekukurumidza kuchaja, iyo inonziwo yekukurumidza kuchaja murwi.
3. ZLG yakazvipira kupa akakodzera ekuchaja mapoinzi mhinduro
Yakavambwa muna1999, Guangzhou Ligong Technology Co, Ltd. inopa chip uye zvine hungwaru IOT mhinduro kune vemaindasitiri nemotokari vashandisi vemagetsi, ichipa vatengi nehunyanzvi tekinoroji uye masevhisi mukati mechigadzirwa hupenyu kutenderera kubva mukusarudzika kwekuongorora, kusimudzira uye dhizaini, kuyedza uye kupihwa chitupa kusvika kuwanda kugadzirwa anti-manyepo. Zhabeu zvivakwa zvitsva, ZLG inopa mhinduro yakakodzera yekuchaja murwi.
1. Kuyerera murwi
AC murwi ine yakaderera tekiniki yakaoma uye yakakwira mutengo zvinodikanwa, kunyanya zvinosanganisira kuchaja control unit, charger uye kutaurirana unit. Ikozvino stock uye inotevera inotevera kuwedzera inouya kubva mukutenga mota, kunyanya kubva kufekitori yemota inotsigira. Tsvagiridzo nekuvandudzwa kwemurwi wese wekuchaja unosanganisira kuzvidzidzira kweya fekitori yemotokari, anotsigira zvikamu zvemabhizinesi efekitori yemotokari uye zvivakwa zvinotsigira zvechaja murwi bhizinesi.
AC murwi unowanzoenderana neARM yekuvakisa MCU, iyo inogona kusangana nezvinodiwa zvinoshanda. ZLG inogona kupa magetsi, MCU, zvigadzirwa zvemamojimendi ekutaurirana.
Iyo yakajairika block dhizaini yeiyo general scheme inoratidzwa pazasi.
2. DC murwi
DC murwi (inokurumidza kuchaja murwi) sisitimu yakaoma, kusanganisira kuona kwenyika, kuchaja kuchaja, kuchaja kutonga, kutaurirana unit, nezvimwe. Parizvino, hofori zhinji dzinofanira kutora musika uye kukwikwidza ndima, uye chikamu chemusika chinofanirwa kuve zvakabatanidzwa.
ZLG inogona kupa yakakosha bhodhi, MCU, yekutaurirana module, yakajairwa mudziyo uye mimwe mikana.
4. Remangwana rekuchaja murwi
Pasi pekuvhima hofori, indasitiri yekuchaja murwi iri kuitika shanduko huru. Kubva pakuona kwenzira yekusimudzira, hazvidzivirike kuti huwandu hwemapombi ekuchaja huchawedzera, mhando dzemabhizinesi dzichapunzika, uye zvinhu zveInternet zvichabatanidzwa.
Zvisinei, kuitira kuti vatore musika uye vatore nharaunda, hofori zhinji dziri kurwira nzira yavo, pasina pfungwa ye "kugovana" uye "kuvhura". Zvakaoma kugovana dhata nemumwe. Kunyangwe iyo yekubatanidza mabasa ekuchaja uye kubhadhara pakati peakasiyana hofori uye akasiyana maapplication haugone kuitika. Parizvino, hapana kambani yakwanisa kubatanidza data rakakodzera remaparaji ese ekuchaja. Izvi zvinoreva kuti hapana muyero yunifomu pakati pemapepa ekuchaja, izvo zvinonetsa kusangana nechinodikanwa chekushandisa. Izvo zvakaoma kugadzira chiyero chakabatana, icho chisingaite chete kuti zviomere varidzi vemotokari kunakidzwa neruzivo rwekuchaja zviri nyore, asi zvakare zvinowedzera mari yekudyara nemari yenguva yekuchaja hofori dzedutu.
Naizvozvo, kumhanyisa kwekusimudzira uye kubudirira mune ramangwana kana kutadza kweye indasitiri yekuchaja murwi kunoonekwa nekuti chiyero chakabatana chinogona kuumbwa kusvika padanho rakakura.